वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : 'पूर्ण क्रान्ति' कस्तो हुने हो?
'पूर्ण क्रान्ति' कस्तो हुने हो?
यहि शीर्षकमा मेरो एउटा पाठक प्रतिकृया छापिएको छ, कान्तिपुर दैनिकमा।
मैले पठाएको (असम्पादित) भने तल छ।
झलक सुबेदीको 'पूर्ण क्रान्ति' कस्तो हुने हो?
माघ ११ को 'अँध्यारो गल्लीको मुखनिर' शीर्षकको आफ्नो लेखमा झलक सुवेदीले एमाओवादी र विशेषगरी बाबुराम बाहेक सबैको उछितो काढेका छन्। उनका सधैंका लेखझैं यहाँ पनि एमाओवादी वा बाबुराम सरकारलाई 'दूधले नुहाउने' कोशिश गरिएको छ र त्यसलाई यो दुनियाँको सबैभन्दा 'उन्नत जात'को दल देखाउन खोजिएको छ। यस क्रममा लेखकले यस बीचमा यो सरकारले गरेका अनगिन्ती देशविरोधी-जनतामारा निर्णयहरुमाथि आँखा चिम्लिदिएका छन्। हरेक दिन यो सरकार केहि न केहि राष्ट्घाती निर्णय गर्छ, जसको एउटै उद्देश्य लूट र केवल लूट हुन्छ। सत्तामा टिकिरहन यो सरकार जे पनि गर्न सक्छ, जो संग र जहाँ पनि झुक्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न बाँकी नेपाली कोहि बाँकी छैन होला अब। झलक सुवेदीज्यूजस्ता 'बुद्धिजीवि'ले यस्ता कुरा नदेख्नु बडो ताज्जुबको स्थिति हो।
राष्ट्रपतिको सदाशयतापूर्ण कदमहरुलाई पनि उनी सधैंझैं उछितो काढ्छन्। आफूमा भएको त्यहि सदाशयताका कारण राष्ट्रपति कमजोर देखिएका हुन् अहिले, नत्र यतिखेरको नेपालमा आफ्नो दायित्वप्रति गम्भिर एक मात्र नेता हुन् डा. रामवरण यादव। जुन आक्रमकता र छुद्रता बाबुरामले ओकलिरहेछन्, त्यहि तहमा राष्ट्रपतिपनि गिरेको भए हामी अझ गहिरो खाडलमा फँसिसकेका हुनेथियौं।
मैले झलक सुवेदीले कम्तिमा पनि डेकेन्द्र प्रकरणमा भने अलिकति इमान्दारी प्रकट गरे होलान् भन्ने आशा राखेको थिएँ तर म यहाँ पनि निराश भएँ। यो प्रकरणका बारेमा उनको बोली बाबुरामको बोलीको हू-बहू हो। डेकेन्द्र थापा दोहरो भिडन्तमा मारिएका थिएनन्, उनी माओवादीका विरुद्ध काम गर्ने कुने सरकारी अधिकारी वा गुप्तचर पनि थिएनन्। उनलाई झुक्याएर, अर्कै विषयमा छलफल गर्न बोलाएर पछि माओवादी 'कमाण्डर'हरुले आफ्नो 'बायोडाटा' लामो बनाउन उनलाई नभएका अभियोगमा यातना दिई-दिई जिऊँदै गाडेर मारेका थिए। अपराधीले कबूल पनि गरीसकेका छन्। त्यसकारण यो विषय कुनै राजनीति नभएर विशुद्ध कायरतापूर्ण अपराध हो। आफूलाई 'प्रगतिशील' ठान्ने झलक सुवेदीले यति साधारण सत्यलाई पनि बंग्याउन मिल्छ? के झलक सुवेदीपनि सरकारी दानापानीमा डुबीसकेका हुन्?
अझ चसक्क हुनेगरी उनी डेकेन्द्र प्रकरणलाई 'अधूरो क्रान्ति' को फल भनिदिन्छन्। उनको विचारमा, उनले र माओवादीले चाहेजस्तो 'पूर्ण क्रान्ति' सम्पन्न भईसकेको भए यो प्रकरण यसरी उठ्न सक्नेनै थिएन। झलक सुवेदीज्यू, यहाँको क्रान्ति 'पूर्ण' कति डेकेन्द्र थापाहरु यातना पाएर जिऊँदै गाडिनुपर्ने हो, ता कि पूरै देश चरम आतंकित भएर टाउको उठाएर चूँ गर्न पनि नसकोस्, देशबाट सञ्चार माध्यमहरु गायब हुन् र न्यायका सब ढोकाहरु बन्द हुन्। सुवेदीज्यू, के यहाँको 'पूर्ण क्रान्ति' सामन्ती र बर्बर मध्ययुगसंग ठ्याक्कै मिल्ने हो?
Posted by Basanta at 9:28 PM
Labels: प्रकाशित, समसामयिक
Anonymous January 27, 2013 at 10:08 PM
झलक सुवेदी अचम्मै गरी 'मेटामर्फोज्ड' भएछन् , साँच्चै उनले यस्तो बोल्न र लेख्न हिसिला भाउजूको अक्षय कोषबाट के के पाउँछन् कुन्नि , खोजीकै विषय हुन सक्छ ।कास्की मकै खोलाका उनी , मकै खोलेको नाम ट्वीट गर्छन् । झलक सुवेदी अखिल पाँचौबाट ( एमाले भातृ संगठन) बाट रविन्द्र अधीकारी भन्दा अघि पृथ्वी नारायण क्याम्पस स्व वि युका सभापति थिए , सभापति नै रहँदा स्ववियु कोषाध्यक्ष लक्ष्मी कार्कीसंग इलिइलु गरेका उनले जन आन्दोलनतिर उनीसंग बिहे गरे भन्ने सुनियो। एमाले विद्यार्थी संगठन अखिल पाँचौको किल्ला मानिने पृनाक्याबाट स्ववियु सभापति भैसकेका उनी बाहेक सबै जसो ( सोमनाथ प्यासी, खगराज, तुल बहादुर, रविन्द्र अधिकारी आदि र रामनाथ ढकाल, श्रीमाया थकाली, हितकाजी, निल बहादुर पुन आदि समेत ) र कतिपय त्यो भन्दा तल्लो तहमा काम गरेकाहरू पनि एमाले पार्टीको माथिल्लै तहमा पुग्न सफल भए , तर एमालेमा झलक सुवेदी र उनकी पत्निलाई सायद उनीहरूकै कुनै गल्तिका कारण कुनै भाउ मिलेन । फलतः झलकजीले श्रीमतिलाई आइएनजिओको जागिरतिर लगाएर आँफू सामान्य स्तरको कमनिष्ट मार्काको पत्रकारितातरि लागेर अल्झिए । यसो गर्नु पर्दा उनमा भयंकर कुण्ठा जागृत भयो र आफ्नै माउ पार्टी प्रति आक्रोश पनि बढ्यो। यस्तो संगीन परिस्थितिमा उनले माओवादी आड फेला पारे र त्यही खेतीमा रमाउन थाले । अहिले त उनी अचानक द्वन्दविद पो बनेको सुन्नमा आयो, आखिर स्पोन्सर गर्ने जत्था बनाउन सक्यो भने यो मुलुकमा कोही केही पनि त बन्न सक्छ ।
uchhito February 1, 2013 at 5:11 AM
हुन त आफ्नो दिमाग प्रयोग नगर्ने र जता जता फाईदा हुन्छ उतै लाग्ने अवसरबादीहरुले झलक सुबेदिलाई नबुझ्नु स्वाभाबिक हो !
झलक सुबेदी अचम्मै metamorphosed भएछन भन्ने पहिलो वाक्य सहि हो !--उन्ले एमाले जस्तो दल को दल्दल त्यागे !
झलक सुबेदी मकैखोलाका हुन !मकै खोलेको नामले टुइट गर्छन् !--सही हो !-मैले पनि फलो गरेको छु !
झलक सुबेदी विद्यार्थी राजनीतिमा सफल रहेछन भन्ने बुझियो !राजनितिको क्रममा प्रेम गरेछन र विवाह पनि ! 'इलुइलु' भन्ने शब्दले यो लेख्ने कृष्ण पौडेल भन्ने मनुवाको बौदिकता ब्यक्त गर्छ !
अरु धेरै एमालेको झोला भिरेर माथि पुगे !--सही हो ! झलक पुगेनन ! उन्को श्रीमती पुगिनन ! ४६ सालका योद्दाहरु सबै माथि पुग्नलाई लडेका थिएनन !झलक सुबेदी नेपालको सबैभन्दा गहकिलो स्तरिय मुल्याङ्कन मासिकका सम्पादक थिए ! यो कुन्ठा होला ? अनी भर्खरै उन्को गोर्खा भर्तीको नालिबेली भन्ने पुस्तक पुरस्क्रित भयो !त्यो किताब पढ्नुस् नेपाली कसरी भेडा च्यङ्रा जसरी लडाईंको लागि प्रयोग भयो थाहा हुन्छ ! अलिकती बुद्दी बढ्ला र अलिकती झलक को झलक पनि पाउनुहोला ! कृष्णजी र बसन्तजी !
बाँकी झलक सुबेदीले माओवादीको कती खाए भन्ने रिसर्च यहाँहरु जस्ता दिग्गजको जिम्मा !
अन्त्यमा झलक सुबेदिकै मर्काको लेख खगेन्द्र सङ्रौलाको पनि आको छ ! http://www.nagariknews.com/opinions/98-opinion/52776-2013-01-29-04-45-29.html पढ्नु होला ! अनी उन्लाई पनि हिलो छेप्नु होला ! ओली र कनकमणी जस्ता उस्ताद हुँदाहुँदै कुतर्कको कमी हुनेछैन देशमा ! आवश्यक परे सोधेरै लेख्नु होला !
Basanta February 1, 2013 at 3:50 PM
उछित्तोजी, प्रतिकृयाको लागि यहाँलाई धन्यबाद!
यहाँको प्रतिकृया कृष्णजीको प्रतिकृयामाथिको प्रतिकृया हो भन्ने मैले बुझें। कृष्णजीले आफ्ना तर्फबाट जवाफ दिनुहोला नै।
मैले आफ्नो सानो टुक्रोमा जुन कुरालाई केन्द्रमा राखेको थिएँ, त्यसका बारेमा भने एक शब्द पनि देखिन। मूल कुरो, डेकेन्द्र थापाको हत्या क्रान्ति हो कि निर्मम हत्यामात्रै हो भन्नेनै हो। त्यो एउटा निर्दोष मान्छेलाई झुक्याएर गरिएको कायरतापूर्ण हत्या थियो भनेर सबैलाई थाहा छ, माओवादी आफैंले पनि उहिल्यै स्विकार गरिसकेको छ यसलाई। अब यतिखेर झलकजी त्यसलाई न्यायोचित र क्रान्तिकारी देखाउन कनी-कनी बल गर्दैछन्। सामान्य मानवीय संवेदना र इमान्दारी पनि देखाउन सकेका छैनन् उनले यसमा, अन्धो भएर बाबुरामा र पुकदाको बोलीमा लोली मिलाईरहेका छन्।
झलकजीका अरु 'उपलब्धि'हरुलाई पनि यहाँ उचाल्नु झन् हास्यास्पद लाग्यो मलाई। उनले 'मूल्यांकन' मासिकको गतिलो सम्पादन गरे होलान्, मैले मानें तर त्यो नेपालकै सबैभन्दा गहकिलो र स्तरीय हो कि होईन भन्ने कुराचाहिँ फरक हो। त्यसले डेकेन्द्र थापाको हत्यालाई 'क्रान्तिमा' परिणत गर्दैन। त्यस्तै 'गोर्खा भर्तीको नालीबेली' उनले लेखेको कुरा समाचारमा पढेको हुँ, कुनै दिन किताबै पनि पढिएला तर 'बुद्धि' पढाउनका लागि संसारमा अब यहि किताबमात्रै बाँकी रहेछ भन्नेचाहिँ तपाईँबाटै थाहा भयो।
फेरि संग्रौलाले त्यस्तै लेख लेखे भन्दैमा झलकले लेखेको कुरो ठिक र नम्बरी प्रमाणित हुँदैन, त्यसकारण यस्ता रुञ्चे तर्क नगरौं। बाँकी, ओली र कनकमणि आदिलाई पनि यहाँ ल्याउनुको कुनै तुक छैन। झलक र संग्रौलाका पिँध नभएका कुराका खण्डन गर्न कसैलाई सोध्नु पर्दैन। अलिकति चिन्तनशक्ति र मानवीय संवेदना भएका जो सुकैले पनि तिनमा लुकेको यथार्थ भेटिहाल्छन्।
uchhito February 1, 2013 at 4:45 PM
के त्यतिबेलाका हत्याका मुद्दाहरुलाई अहिले जुन प्रकृयाबाट बिउझ्याइयो त्यसरी बिउझ्याएर शान्ति आउँछ ? के दैलेख शान्त भयो ? के डेकेन्द्र दैलेखमा पुरिदा अरु धेरै माओवादीहरु सिवपुरिमा र भैरबनाथ गणमा पुरिएका होइनन ? तपाईंको सम्बेदना छानी छानी जाग्रित हुन्छ हो ? कनक्मणीहरुको जस्तो ?
झलक सुबेदीको बिचार बाबुराम सँग हुबहु मिल्छ त्यसमा तपाईंलाई आपत्ति रहेछ ! तर बाबुरामले बेलायतमा पक्राउ परेका कर्नेललाई पनि छुटाउने पहल गरेका छन !प्रतिपक्ष जस्तो कर्नेल लामालाई छुटाउ भन्ने र डेकेन्द्रको चिहानमा गएर अरण्य रोदन गर्ने चरित्रलाई के भन्नु हुन्छ ? हिजोका बिद्रोहिको यो सहिस्णुता प्रति सबै गज्जबले आक्रमक छन ! सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने अध्यादेस किन रोकिएको हो राष्ट्रपतिबाट ? सोच्नुहोला ! यो त 'हलो अड्काउने र गोरु पिट्ने' जस्तो भयो !
तपाईंले मेरा प्रतिकृयामा छिद्र खोज्दा पाउनुहोला तर म माओवादी होइन ! र माओबादिलाई हत्यारा देख्ने तपाईंजस्तो पुर्वाग्रही पनि होइन ! उनीहरु बिद्रोही थिए !आज देश उनिहरुको एजेन्डामा हिंडेको स्पस्ट छ !
मैले झलक सुबेदीको जुन मात्रामा बद्ख्वाइ (प्रतिकृया होइन ) भएको देखे त्यस्को खण्डन गर्दा उन्को किताब र सम्पादन गरेको पत्रिकाको बारे आफ्नो बिचार राखेको हुँ ! दुनियाँको अन्तिम र एक मात्र किताब जस्ले बुद्दी बढाउँछ भन्ने सोच्नु भएन !मेरो टर्हो भाषा(जो आँफैमा प्रतिकृया थियो ) ले त्यस्तो सोच्न वाध्य बनायो होला ! कुरा त्यसो चाँही होइन है , बसन्तजी !
तपाईंको नरुन्चे , पिध पिधसहितको बिचार माथि असमतहरुलाई जसरी 'दानापानी' को आसंका गर्नु भयो त्यो कति पिध भएको होला ? माफ गर्नुहोला तर मानवअधिकार भन्दा माओवादीलाई बाहेक भन्ने जस्तो गरी लेख्नेहरु सँग धेरै गलफत्ती गर्ने समय अभाव छ ! बाइ बाइ !
Basanta February 2, 2013 at 1:55 AM
उछित्तोजी, 'बाइ बाइ!' त भनीसक्नुभएको छ, त्यसैले यो ब्लगमा फेरि आउनुहोला-नआउनुहोला। तैपनि, त्यतिबेलाका सबै मुद्दाहरु राजनीतिक थिएनन्, र 'युद्ध'को आँखाले मात्र हेर्नु पर्ने पनि थिएनन्। त्यो बेलाका हरेक मुद्दा, टापटिपे चोरी र अंशबण्डा देखि भयंकर डकैतीसम्मलाई डेकेन्द्र थापालाई जस्तै गरी जमीनमुनि दबाउनुपर्छ भन्ने सोच आधारभूत रुपमै गलत छ। यसले देशमा दण्डहीनताको जगजगी गराउनेछ। कुरा धेरै भईसकेको छ, डेकेन्द्र थापा सशस्त्र द्वन्द्वको कुनै पक्षका पनि थिएनन् र उनलाई अनाहकमा यातना दिईएको र मारिएको हो। त्यसकारण उनको हत्या विशुद्ध हत्या हो त त्यसको हिसाब-किताब हुनैपर्छ। मैले यसो भनीरहँदा, भैरवनाथ गण वा शिवपुरीमा यातना पाएका र मारिएका निर्दोषहरुलाई बिर्सेको भन्ने हुँदैन। न्याय दुबै थरीले पाउनैपर्छ-माओवादीले सताएकाले पनि र शाही सेना वा तत्कालीन सत्ताले सताएकाले पनि। त्यसकारण तपाईँ ढुक्क हुनुस् मेरो संवेदना पक्षपाती छैन। भैरवनाथ गणको हिसावकिताबको लागि डेकेन्द्र थापा प्रकरण आफैं एउटा प्रस्थान बिन्दू बन्न सक्थ्यो तर आफू सिंहासनमा बसीसकेपछि पुकदा र बाबुरामको स्मृतिबाट भैरवनाथ काण्ड गायब भईसकेको छ। उनीहरुले अरुलाई त बिर्से-बिर्से, आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि बिर्सिसकेका छन्। म त देशमा डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरु मध्ये केहि पक्राउ पर्नु र विदेशमा कुमार लामा पक्राउ पर्नु दुबैबाट खुशी छु, अरु कसले वा कुन पार्टीले के भने त्यसमा म केहि जिम्मेवारी लिन चाहन्न किनभने म कुनैपनि दल वा नेताको दास होईन।
यो देश यदि सँच्चिकै नयाँ बाटोमा हिँड्न चाहन्छ भने ती हरेक काण्डहरुको उचित हिसाबकिताब हुनै पर्छ। नत्र, अहिले दबाईए पनि पीडितले कहिल्यै बिर्सनेछैनन् र यो घाऊ झन् भित्र-भित्रै पाक्दै जानेछ र कुनै दिन क्यान्सरको रुप लिनेछ। यसैले यो काममा हाम्रो आफ्नै राज्य अघि सरेको राम्रो, नत्र कुमार लामा प्रकरणले पनि देखाईसक्यो, खुम्चिएर सानि गाऊँ बनीसकेको यो विश्वमा, अरु अगाडि सर्नेछन्। त्यसकारण, पुकदा र बाबुराम आफ्ना कार्यकर्ताको रगतसंग, नेपाल र नेपाली जनतासंग ईमान्दार छन् भने डेकेन्द्र प्रकरण र अरु प्रकरणहरु अघि बढ्नैपर्छ,कृतघ्न हुने हो भने त कुरै बेग्लै भयो।
जहाँसम्म सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको कुरा छ, संविधानसभा-संसद छऊञ्जेल पुकदा र बाबुराम के हेरेर बसेका थिए? अहिले कुनै छलफलनै हुन नसक्ने स्थितिमा उनीहरुले आफ्नो स्वार्थले लिपेर पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले किन मान्छन्? त्यो अध्यादेशमा के के छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताको सरोकार हो कि होईन? कति जनाले पढेका छन् त्यो? त्यसमा कति र के छलफल भएको छ? त्यो आयोग अब अर्को निर्वाचित संसदले मात्र बनाउनेछ। त्यतिञ्जेल सम्मका लागि देशमा कानून छ र अदालत छ।
र अन्त्यमा, तपाईँ माओवादी नभएजस्तै म पनि कुनै कांग्रेस-एमाले होईन। यो कुरामा तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ। यहि एउटा कुराकानीके आधारमा मेरा बारेमा पूरा धारणा नबनाउनुहुन हार्दिक अनूरोध गर्दछु।
gckarki February 6, 2013 at 10:20 PM
राम्रो लाग्यो । साउनमा अाखा फुटेको गोरूले संधै हरियो देख्छ । अनि दानापानामा हुर्किएका मानिसहरूले अाफनो वुद्धि विवेक हराइ सकेका हुन्छन् ।
jhalak subedi jastaako ke kuro garnu. bekaarko jadyaahaa.
Herdai jaanus, jo sattaamaa aayo uskai puchhar samatne chha yasale ra hari roka jastaa awasarbadi harule.
राष्ट्रिय एकता दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!